retired - Synonyms of retired | Antonyms of retired | Definition of retired | Example of retired | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for retired
Top 30 analogous words or synonyms for retired
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့ Retired Chief Librarian, Yangon University Library
သက်ထွန်း၊ ဦး(ဝဏ္ဏကျော်ထင်) ဘာသာပြန် စာအုပ် အဖြစ် ဦးမြဟန်၏ 'ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စာပေလက်ရာများ' ကို 'The Writings of General Aung San' ဟူ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ သမိုင်းစာအုပ် အဖြစ် 'Selected Writings of Retired Ambassador U Thet Tun' ကို ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ Once the DPP had representation in the Legislative Yuan (LY), the party used the legislature asaforum to challenge the government. However, it did not emerge asaformidable force until 1991, when the elderly LY members elected from the mainland provinces in 1948 retired. Fears that the DPP would one day take control of the legislature led then-President Lee Teng-hui to push throughaseries of amendments to strengthen presidential power (for example, the premier of the Republic of China would no longer have to be confirmed by the Legislative Yuan).
ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် အခြားဒုတိယကမ္ဘာစစ်ခေတ်သုံးလေယာဉ်များနှင့်မတူသည်မှာ ဘီ-၂၉ သည် စစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကာလရှည်ကြာစွာဆက်လက်အသုံးပြုပြီး စထရာတိုဗီးရှင်း ကုမ္ပဏီက ရုပ်မြင်သံကြား မိုးပျံလွှင့်စက်အဖြစ် လက်ရှိအချိန်ထိ အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ကာလများတွင် ဘီ-၂၉ လေယာဉ်များကို အမျိုးမျိုးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှတော်ဝင်လေတပပ်သည် ဘီ-၂၉ လေယာဉ်များကို ဝါရှင်တန်ဟူသောအမည်ဖြင့်မှည့်ခေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ တွင် ကင်ဘာရာအမျိုးအစား ဗုံးကြဲဂျက်လေယာဉ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသည် ဘီ-၂၉ ပုံစံတူကို တူပိုလက်ဗ် တီယူ-၄(Tupolev Tu-4)အဖြစ် လိုင်စင်မဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ The B-29 was the progenitor ofaseries of Boeing-built bombers, transports, tankers, reconnaissance aircraft and trainers including the B-50 Superfortress (the first aircraft to fly around the world non-stop) which was essentiallyare-engined B-29. The type was finally retired in the early 1960s, with 3,970 aircraft in all built. While dozens of B-29s have survived through today as static displays, only one, "Fifi", remains on active flying status.